Ndị otu egwuregwu rutere Moscow - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Ndị otu egwuregwu erute na Moscow
Ndị otu egwuregwu erute na Moscow
12 / 02 / 2020 11 / 02 / 2020 site Antonio Gancedo
Otu International Base Team rutere Moscow na 9th nke February, n'echi ya na ndị nnọchi anya Gorbachev Foundation zutere
Ndị otu mba ụwa nke ụwa nke abụọ, bịarutere na Moscow na February 2, n'echi ya na ndị otu Gorbachev nwere nzukọ.
Na nzukọ a, emere na February 10, n'etiti ndị otu nke Abụọ Mgbakọ nke Abụọ maka Udo na Ọgba aghara na Gorbachev Foundation, a gbanwere echiche maka mkpa ụwa niile iji wuo àkwà mmiri iji mee ka obi dị jụụ n'etiti ndị dị iche iche.
A kọwara nzube nke World March for Peace and Nonviolence, ka ịgbatị ma jiri udo, nsọpụrụ, nnabata, ịdị n'otu, akparamagwa imepụta àkwà mmiri na ọkwa niile, nke onwe, mmekọrịta, n'etiti ndị dị iche iche.
A kọwara ụfọdụ omume rụrụ na Machị, gburugburu ụwa n'ụzọ ya na ebe ndị ọ na-agabigaghị.
Emekwara ya na mgbasa ozi nke ICAN, dika onwa abuo nke abali abuo ka a na-agbasa ozi ya ma obu na agafere, na-agwa banyere mkpa ọ dị ịkọwapụta atụmatụ ndị na-akwalite mbinye aka. TPAN (Nkwekọrịta maka mgbochi nke Ngwongwo Nuklia).
Emekwara ka amata ebumnuche a imeghachi Machị afọ ise ọ bụla, ma, ịhapụ ịhapụ oge ọ bụla na-arụ ọrụ maka Udo na anaghị eme ihe ike na mbara ụwa.
Site na ụbọchị nke abụọ nke Mach, ndị nnọchi anya nke Gorbachev Foundation akwụkwọ nke 1st World March.
Emechara nzukọ ahụ enwere ike ịmekọrịta ọnụ n'ọdịnihu…
Ihe ngosi anyi nwere onwe anyi na Rognac
Nzuko nke Coruña maka udo na ogbaaghara